Tababarayaasha | Achieve | Xarunta Minnesota ee Hormarinta Xirfada
Nidaamka Hormarinta Xirfada Minnesota
Achieve waxay taageertaa nidaamka ansixinta goboleed ee loogu talagalay horumarinta xirfadaha tababareyaasha ee goobta daryeelka carruurnimada iyo waxbarashada. Fursadaha dhacdada tababarka la heli karo waxaa lagu bixiyaa Tababarayaasheena La ansixiyay ee hormarinta tababarka iyo shaqada. Achieve waxay ku kortaa dhacdooyinkeena tayada sareeyo oo la heli karo.
Waqtiga Ka baarandaga
Waqtiga Ka baarandaga Ansixinta Koorsada
Jaheynta La ansixiyay ee tababaraha
Xiiseynayo ku caawinta dadka kale inay guuleystaan? Booqo Develop si aad u cosatid inaad noqotid tababare la ansaxiyay. Jaheynta Nidaamka Tababarkeena La ansixiyay waxay tilmaameysaa noocyo kala duwan oo tababaraha ee laguu heli karo. Isticmaal jaheynta si aad u eegtid sharuudaha gaarka oo nooca tababar walba. Noqo Tababaraha ay Anisixiyeen Achieve si aad ula wadaagtid waaya aragaaga iyo taageertid Daryeelka Carruurta iyo Waxbarashada Goobta shaqada MN!
Sahmi jaheynada, xeerarka, iyo nidaamka tababaraha ee la xiriiro tabaraha iyo koorsada la ansixiyay.
Aqbaaraha Xeerka Tababaraha
La ogeysiiyay. Fiiri dib u cusboonaysiinta hishiisyada tababaraha. Achieve waxay si joogta ah dib u eegtaa oo u cusbooneysiisaa siyaasadaha iyo nidaamyada si loo xaqiijiyo tababarayaal tayo sare leh iyo tababar.
Cusboonaysiinta Tababaraha (Noofembar 2017)
AQabaaraha Tababaraha (Maajo 2017)
Aqbaaraha Tababaraha (Diseembar 2016)
Intaa waxa dheer Liiska Maalgeliyaha Tababarka Ansixinta Tooska (Nofeembar 2016)
Xeerka Ansixinta Tababaraha wuxuu Badelaa Ku dhawaaqida (Maajo 2016)
Xeerka Ansixinta Tababaraha wuxuu Badelaa Ku dhawaaqida (Noofembar 2015)
Xeerka Qoraalka MNCPD: CEUs (Maarso 2015)
Dooq Cusub ee Ansixinta Tababarka Tooska ah (Janaayo 2015)
Qiimeynta Tababarka Cusub iyo Qalabka Tababarka (Diseembar 2014)
Cusbooneysiinta Tababaraha iyo Qiimeynta Qoraalka (Nofeembar 2014)
Warbixin Dheerad ah ee La xiriirto Cusbooneysiinta Tababarka iyo Dib u qiimeynta Qoraalka (Sebteembar 2014)
Ansixinta Tababaraha iyo Dib u qiimeynta Qoraalka (Sebteembar 2014)
Nidaamka ansixinta koorsadeena waxay sare u qaadeysaa tababar tayeysan ee Daryeelka Carruurrta iyo Shaqaalaha Waxbarashada oo gobolka oo dhan. Achieve waxay dib u fiirinaysaa koorsooyinka dib u eegista si ay u hubiyaan:
raaceen dhaqamada ugu wanaagsan ee goobta.
wuxuu ku saleysanyahay dhaqamada hormar ahaan ku haboon iyo afkaaraha hormarka canuga.
Nidaamkaan wuxuu taageeraa codsiga dhaqan ahaanta ah ee Dhaqaatiirta CCE oo kordhiso hormarka iyo waxbarashada carruurta ee Minnesota.
Tababarada Achieve waxay leeyihiin ujeedooyin muhiim ah oo si toos ah ula xariirta natiijooyinka waxbarashada gaarka ah. Koorsooyinka la ansixiyey waxay la xiriiri karaan Aqoonta iyo Qibrada Xirfadaha Minnesota ee Caruurnimada hore; iyo mabaadii’da barashada dadka waaweyn.
Su’aalaha Inta badan la isweydiiyo (FAQs)
Waxaan ahay Tababare. Maxaan ugu baahannahay Xubbinnimada Shaqsiga?
Xubinnimada Shaqsiga waxaa loo isticmaalaa in lagu dabagalo waxbarashadaada iyo waaya aragnimada. Inta lagu jiro Cusbooneysiinta Tababarka, waxaan eegeynaa Diiwaankaaga Waxbarashada si aan u xaqiijino inaad dhameystirtay 30 saacadood ee sharuuda waxbarashada joogtada ah.
Sidee ayaan ku garanayaa Nooca Tababaraha ee la codsado?
Fadlan dib-u-fiiri noocyada Tababaraha ee hadda jirra iyo shuruudaha looga baahan yahay ee kujirra Hagaha Nidaamka Ansaxinta Tababaraha.
Imisa ayuu Anisixnta Tababaraha qaataa?
Waxaan dhameystireynaa codsigaaga tababaraha ee gudaha lix isbuuc ee helitaanka waraaqaha codsigaaga.
Sidee ayaan u gudbiyaa codsiga Tababaraha?
Fadlan raac tallaabooyinkaan si aad u xareysid codsigaaga tababaraha:
Ku Gal Develop si shakshi ahaan.
Bogga Dulmarka Akoonkaaga, riix sanduuqa ee u dhow Become a Trainer, kadib riix badhanka Apply.
Geli warbixintaada oo badhan walba oo riix Keydi iyo Sii soco illaa codsiga dhamaado.
Riix Submit Application ee bogga ugu dambeeyo ee codsiga.
Noo soo dir waraaqda lagu dhameystirayo codsiga.
Waraaqaha aan u baahannahay waxay ku xirantahay nooca Tababaraha aad codsaneysid.
Dib u eeg Hagaha Ansaxinta Tababaraha si aad u hesho liiska dukumentiyada oo dhan. Caadi ahaan, waxaan u baahaneynaa:
2 warqad oo tixraaca la taariiqeeyay lixdii bilood ee la soo dhaafay ee ka hadashaa xirfadaha tababarkaaga
Xarafka hore ee magaca ku qoran, saxeexan, iyo taariikhaysan Foomka Hishiiska Tababarha.
Nidaamka ansixinta tababaraha wuxuu qaataa illaa lix isbuuc. Haddii la ansixiyo, waxaad heleysaa:
Shahaadada Ansixinta Tababaraha oo lagu diray email.
Ka raadi foomka gudbinta ee koorsooyinka Onleenka ee kujira Develop.
Markii haddii loo ansixiyo Tababaraha Achieve, goorma ayaa oggolaanshahayga dhacayaa?
Waxaan hadeer bixinaa labo noocyo oo ansixin ah:
Ansixin Buuxo – La siiyay markii dhammaan sharuudaha la buuxiyay. Ansixintaan waxay shaqeyneysaa sadex sanno.
Ansixinta Xirfada – La siiyay markii dhammaan sharuudaha markii laga reebo sharuuda Ardayga Qofka weyn waa la buuxiyay. Oggolaanshahan wuxuu ansax yahay hal sanno, wakhtigaas, shuruudaha Barashada Dadka waawayn waa in la buuxiyaa si loo helo oggolaanshaha saddexda sano ah ee buuxa.
Goorma ayaan cusbooneysiiyaa xubinnimadeyda tababarida?
Cusbooneysii nooca xubinnimada tababaraha la ansixiyay 60-90 maalmood ka hor taariiqda dhacitaanka ee lagu daabacay shahaadadaada. Waqtigaas, waxaad u baahaneysaa inaad buuxisid sharuudaha cusbooneysiinta xigta:
Buuxi ugu yaraan 30 saacadood ee tababarka la xiriiro tan iyo taariiqdaada cusbooneysiinta/ansixinta.
Samey ugu yaraan 3 dhacdooyin tababar la ansixiyay tan iyo taariiqdaada cusbooneysiinta ugu dambeyso.
Sidee ayaan ugu gudbiyaa koorsada ansixin?
Si loo gudbiyo koorsada ansixinta, fadlan:
Gal Akoontigaada Develop.
Riix Gelida Tababarka ee godka bidix.
Riix badhanka Koorsada.
Riix Koorso Cusub.
Ka shaqey illaa codsiga oo geli dhammaan warbixinta, Keydi iyo Sii soco illaa mid walba ee 5 badhan illaa aad ka gaartid badhanka 6: U gudbi Ansixin, riix Gudbi.
Koorsadaada dib ayaa loo eegayaa ee taariiqda amarka gudbinta. Waxaa laguugu soo ogeysiinayaa i-meel ahaan ansixintooda ama haddii saxitaano loogu baahdi 6 isbuuc gudahood ee gudbinta koorsadaada.
*Nidaamka wuxuu qaadan karaa muddo dheer haddii saxitaanada waa loo baahanyahay.
Intee ayay qaadataa in koorsadeyda la ansixiyo?
Goorma ayay koorsadeyda la ansixiyay dhaceysaa?
Koorsooyinka la ansixiyay waxay shaqeyneysaa shan sanno.
Koorsadeyda waa la ansixiyay. Hadda maxaa?
Kadib markii koorsadaada la ansixiyo, Dhacdada Tababarka mustaqbalka waa la aasaasi karaa. Si loo abuuro Dhacdada Tababarka mustaqbalka fadlan:
Ka raadi Heerka Koorsada hoosta dalabka bogga oo dooro La ansixiyay.
Riix badhanka Fiiltarka Koorsooyinka (dhammaan koorsooyinka la ansixiyay waxay ka muuqanayaan hoosta sanduuqa raadinta).
Riix Koorsada aad jeclaan laheyd inaad ku aasaastid dhacdada.
Riix Dhacdada La balamiyay.
Shaqada illaa dhacdada codsiga oo geli dhammaan warbixinta, Keydi iyo riix Gudbi.
*Hubi inaad heshid Sameynta Aqoonsiyada# ka qeybqaatayaasha ee Dhacdada Tababarka. Tani waxay fududeyneysaa gelitaanka ka qeybgalka.
Dhacdadeyda tababarka way dhameystiran tahay. Sidee ayaan u galaa ka qeybgalaha?
Ka qeybgalka waa in lagu geliyaa gudaha sadex maalmood ee Dhacdada Tababarka. Si loo geliyo ka qeybgalka, fadlan:
Riix badhanka Dhacdooyinka.
Riix Dhacdada aad u baahantahay ku gashid ka qeybgalaha ee.
Ka raadi Maamulida Dhacdada baluuga hoos.
Dooro Maaamul Liiska.
Raadi: + Ka qeybgalaha si aad ugu dartid ka qeybgalaha.
Geli ka qeybgale walba ee Aqoonsiga # gaarka ah ama magaca.
Riix Dhamey Diiwaangelinta.